Semalt: Nzira yekudzivirira ma-Pop-ups, Wedzera Kusiyanisa, uye Kutarisana neMuzilla Firefox
Muhurukuro inotevera, Max Bell, Semalt Mutungamiri Wekubudirira Kwemutengi, anotsanangura zvose zvigadziro zvaunoda kuzive pamusoro pokuti paunenge uchitarisa vanhu vari mumushambadzi wako weMozilla Firefox.
Chii chinonzi pop-ups?
Pop-ups mawindo evhidhiyo anowanzoonekwa pane browser yako pasina mvumo yako. Havana kumbozadza chinyorwa chose uye vanogona kuratidza kumusoro kwe peji rezvino kana pasi payo (pop-unders). Firefox ine chinhu chinoshamisa chinobvumira vashandisi vavo kutonga zvose pop-ups uye pop-pasi - play casino no deposit. Kana iwe ukashanyira peji yezvaunogona kuita, uchaona kuti chigadziro chekuvhara pasi chinoshandiswa nekusara. Kana iyo user isati yambobvisa bhu renhau ye Firefox, iyo ichaonekwa chero nguva apo browser inovhara pop-up. Chiratidzo chinoratidza kuvhara pop-up kucharatidzawo mune ikozvino kero yebha.
Kuti uwane zvigadziro zvekuvharidzira pop-up panzvimbo yacho, chengetera pane Zvinyorwa kubva pane ibha rekutsvaga kana mufananidzo mubhuresi yekero. Unogona kusarudza kubva pane zvinotevera:
Bvumira kana kudzivisa kuparadzirwa panzvimbo ino;
Shandisa pop-up Blocker zvisarudzo;
Sarudza kusaratidza iwe shoko rinenge richizivisa pamusoro pekuvharirwa pop-up;
Ratidza tsanangudzo pamusoro pezvidzivirirwa pop-up;
Kudzivirira pop-ups panzvimbo ino kunogona kupindira kune mamwe mawebsite. Mamwe mawebsite anoshandisa pop-ups zvimwe zvezvinhu zvavo zvinokosha. Kana iwe ukavhara ma-pop-ups, zvinodzivisa zvinhu izvi. Kubvumira mamwe masayiti kuti ave ne-pop-ups achimhanya paunenge uchitsvaga, iwe unoda kuwedzera mawebsite akanyorwa urongwa hwevaya vanobvumirwa kuratidza ma-pop-ups.
Kudzivirira pop-ups hakusi kushanda nguva dzose..Dzimwe mawebsite anoziva nzira yekushandisa nzira dzakafuridzirwa, izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma Firefox kudzivirira kuti vape-pops avo varege kuonekwa kunyange mushure mekudzivhara.
Pano ndizvo zvingatarisira mu pop-up blocker zvirongwa:
1. Kupinda pop-up blocker zvirongwa
Kushandura bhokisi re menu pane kona yepamusoro-kona uye sarudza Options kubva pakuderera pasi;
Tora paIndaneti neKachengeteka pane;
Uncheck maDevelop Block pop-down pasi peMvumo chikamu;
Pasi Pasina mabhuku, firiji itsva yekukurukurirana inowanikwa paunowedzera urongwa hwemasayiti aunoda kubvumira;
Nyaya inoita kuti iwe:
Rega: ikubatsire kuwedzera webhusaiti kune rimwe runyararo;
Bvisa nzvimbo: inokubvumira kubvisa webhusaiti kubva pakurongwa rwekunze;
Bvisa Zvose Zvikwata: inobvisa mawebsite yose kubva pakurongwa rwekunze;
2. Chii chinoitika kana pop-up ichiri kuvharwa?
Kutanga, chengetedza kana iyo pop-up inotangira Firefox. Chimiro chinofanira kukuzivisa iwe kana pop-up inobva kune browser Firefox. Kana iri muwindo repup-up pane mufananidzo ane chirevo chinowanikwa mukati mechikwata, ipapo pop-up inobva Firefox. Kusavapo kwaro kunoreva kuti iwe unogona kunge wakambororwa ne-malware pakombiyuta yako iyo ndiyo inobva pamap-ups ako.
Chechipiri, chengetedza kana nzvimbo yacho yakawedzerwa pane yeChirongwa chisina kuwanikwa. Tevera nzira yacho kuti uwane zvirongwa zvekuvharidzira pop-up uye uzarure Bhuku rekukurukurirana bhokisi. Kana iwe webhusaiti inokonzera pop-ups iri mune urongwa hwekunze, tsvaga Bvisa Semaiti, uye chengeta nekuvhara peji.
Dzimwe nguva mahwindo epamusoro anofambisa neFirefox kuti ave nechokwadi chokuti haibvumi pop-ups kune nzvimbo dzinoda kuti vashande. Saka, sarudza kana firimu inoratidza mushure mekunge uchinge wavhara mutsara kana kuvhara kiyi. Kana vakadaro, uye chikwata chekuvhara maitiro chiripo, haufaniri kuva nehanya.
Kana mahwindo ekuputika akagadzirirwa kutarisa semahwindo asi asiri chaizvo, ipapo Firefox haigoni kuvamisa.
Pakupedzisira, kana kubuda-pota kunoonekwa mushure mekuvhura Mozilla kukukumbira kuti uite chikamu kubva kuongororo kubva kuSyverveyGizmo, iyo ikambani yakatsvaga purogiramu uye Firefox haigadziri.